बनेपामा निषेधाज्ञाको एक महिनापछि बजार अनुगमन - संदेश पत्र
बनेपामा निषेधाज्ञाको एक महिनापछि बजार अनुगमन
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनुवारले नेतृत्व गरेको अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्र हरी कार्यालय डिएसपी हरि खतिवडा, सशस्त्र प्र हरी बलको टोली, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डिएसपी अरुण कार्की, ईलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक राजन कोईराला, बनेपा नगरपालिकाका अधिकृत ध्रुव नेपाल, काभ्रे उद्योग बाणिज्य संघका महासचिव रविन्द्र बैदार सामेल हुनुहुन्थ्यो । यो टोली चाँदनीको चोकदेखि तरकारी बजारसम्म अरनिको राजमार्ग दायाँ बायाँ खुलेका पसलको अनुगमन गरेको थियो ।अहिले बजार अनुगमन गर्ने समेतको अधिकार सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई दिएको छ । स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्ष बजार अनुगमन समितिको पनि संयोजक हुन्छन् । त्यसमा कुन क्षेत्रको पसल अनुगमन गर्ने हो, त्यो संग सम्बन्धित जानकार ब्यक्तिलाई राखिन्छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई पनि बजार अनुगमन समितिका संयोजकले आवश्यकता अनुसार सहभागी गराउन सक्छन् ।
तर आजको बजार अनुगमनमा न त स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोहि छन् । न घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका नै । केबल प्रशासन कार्यालय आफु उपस्थित देखाउँदैमा यसको खास अर्थ हुँदैन । अझ संवाददाताहरूसँग सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनुवारले बढी मुल्य सामान बिक्री भैरहेको उपभोक्ताले गुनासो गरेपछि बजार अनुगमनमा आएको बताउनुभयो ।यसको मतलव के सबै उपभोक्ताले आफु ठगिएको गुनासो प्र हरी र प्रशासनमा गरेपछि मात्रै बजार अनुगमन हुन्छ हो ? बजार अनुगमन नियमित हुनु पर्छ । कोहि उपभोक्ताले ठगिएँ भनेर गुनासो गरेपछि अनुगमन गर्ने होईन । किन भने सबै उपभोक्ताको प्र हरी र प्रशासनसँग हुनै सक्दैन ।
उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आयो । तपाईले यति भन्दा बढीमा बेच्न पाउनु हुँदैन भनेर हचुवाको भरमा कसरी भन्ने ? बनेपाका ब्यवसायीका लागि उद्योग वाणिज्य संघ काभ्रेले मुल्य निर्धारण गर्दै आएको छ । तर संघका महासचिव रविन्द्र बैदारका अनुसार नि षेधाज्ञा सुरू हुनुभन्दा अघि बैशाखको १५/१६ गतितिर संघले मुल्य सूची जारी गरे थियो । त्यस यता मुल्य सूची जारी गराएको छैन् ।बैशाख १९ गतेदेखि काभ्रे जिल्ला भर नि षेधाज्ञा छ । प्रशासन कार्यालय यो जेठ महिना पुरै नि षेधाज्ञा थपिसकेको छ । बनेपाका दुई साता लामो शिल जेठ १८ गतेदेखि खोलिएको छ । ‘शुक्रबारको अनुगमन खास गरी शिल हटेपछि र नि षेधाज्ञाको समयमा ब्यापारीहरूले पसल खोल्दा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड कत्तिको अपनाएका छन्, के कस्तो पसल ब्यवसाय खुलेका छन् र बढी मुल्य लिएका छन् कि छैन भनेर हेरिएको हो, उद्योग वाणिज्य संघ काभ्रेका महासचिव बैदारले भन्नुभयो ।’